HomeWararka CaalamkaTaliyaha ciidanka sirdoonka Denmark oo Xabsiga la dhigay
January 11, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Denmark, Wararka Maanta 0
Taliyaha ciidanka sirdoonka Denmark Lars Findsen ayaa la xiray isagoo xabsiga ku sii jiri doona ilaa 4ta februari, sida uu qoray wargayska Ekstra Bladet.
Warkaa waxa xaqiijiyay maxkamada magaalada Kobanheegan.
Maalintii isniinta, dhawr kamid ah warbaahinta deenishka ayaa sheegay, in Findsen loo hayo si qarsoodi ah tan iyo 9kii December. Waxaa lagu eedeeyay inuu faafiyay xog sir ah iyo xog sir ah oo wax u dhimi karta ammaanka Denmark ama xiriirka quwadaha shisheeye.
Sida laga soo xigtay Ekstra Bladet, Findsen ayaa diiday dambiga lagu soo eedeeyay, iyadoo intii ay socotay dhageysiga maxkamadda ay ahayd in uu kiiska ku tilmaamay mid “been ah”.
Sababta aanay warbaahinta deenishku hore ugu sheegin xadhiga Findsen, ayaa ah, iyadoo maxkamadda magaalada Kobanheegan aanay ka qaadin xayiraadda magaca ka hor Isniintii.
Guud ahaan saddex qof ayaa loo xidhay kiiska. Findsen ka sokow, qof kale ayaa sidoo kale xabsiga lagu sii hayay, laakiin siddeed maalmood ka dib ayaa la sii daayay.